トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Horukon avo-endri-javatra-mahita ny alalan 'ny fomba fametrahana
Ao Horukon fisamborana, dia hoy izy tamin'i efa napetraka fisarahana. Pachinko tsena, raha ny varotra Uchikome kendrena ho Horukon, ary malalaka kajy ny fampihenana ny tahan'ny, ianao hoe mifehy ny payout.
fanaraha-maso ny payout ny antokony dia efatra amin'ny dimy avy ao amin'ny fepetra sasany mitsangana, Raha tonga ny fotoana, ianao dia lazaina fa ny rafitra izay allocates ny jackpot. Koa, ny vondrona tapa-kevitra ny Horukon, rehefa namoaka ny jackpot, ROM ny feo efa mba haka mafy nijoro.
feo ny fototra maimaim-poana, na dia tezitra ROM latabatra efa mijoro fa misy tsy mety ho voafidy. Ao
, ireo izay tsianjery ny Horukon fisamborana dia, inona no fitondran-tena isika, dia te-hijery inona no mba efa niditra avo-napetraka rehefa nifoha. To
hahavony fametrahana tamin'izany fotoana izany, indrindra hevitra matetika ho toy ny toe-javatra hita ao amin'ny akaiky ny jackpot latabatra dia ny hoe misy ny tranga toy ny baolina mikoriana amin'ny alalan'ny ninonoanao ny birao dia ho voalohany. Ball izay noroahina ho any amin'ny ara-dal?na andian-tsoratra, dia hiezaka ny Ochiyo ambany izay mifandray amin'ny manintona.
namely ny fantsika tamin'izany andro izany, na lavo eo ambany bouncing amin'ny lafiny isan-karazany, ianao, na niditra tao am-piandohana. Ao amin'ny Grouping voalaza ao amin'io Horukon fisamborana, dia lasa ny zavatra izay omena ao amin'ny mpanova fifandraisana. Rehefa
vondrona Horukon mba hamantarana ny jackpot, ny andriamby mahery asa, dia tsapany fa misy ny fahatsapana fa ny baolina no voatsoaka. Ary avy eo, lasa sarotra toka mba hampihenana ny baolina, efa nanangana azy, toy ny baolina ho any amin'ny alalan'ny-mandalo tsara.
antony izany tranga miseho koa dia ho toy izany koa ho toy ny antony voalaza etsy ambony.
sy, dia voalaza fa isan-karazany ny trangan-javatra na dia ny jackpot ho tonga ny latabatra miseho, ny hevitra mahazatra indrindra teo aminy, dia amin'ny latabatra hafa ao amin 'ny vondrona, Super vokatra sy ny mafy foana Atsurichi miseho, dia toe-javatra mitranga izany tanan-droa. To
hahavony fametrahana tamin'izany fotoana, lehibe isan- Ri rehefa miseho, dia voalaza fa azo esorina eo ho eo isaky ny 9 Chang-peo, ny avo napetraka tamin'izany fotoana izany, dia misy ihany koa ny teoria fa ny mety fa ny vondrona izany dia ny handresy ny jackpot tapa-kevitra dia avo.
Ankoatra izany, rehefa manaraka fanapahan-kevitry ny vondrona natao, fa ny sasany ny olona izay tonga eo amin'ny baolina manomboka ratsy.
sy ny toerana avo tamin 'ny fotoana ny loteria jackpot efa lazaina fa matetika ny tany, ianao loteria ny 4 in isan'ora no ho tanterahina.
na mihoatra, dia toe-javatra izay mitranga ao amin 'ny hahavony Horukon fametrahana tamin'izany fotoana izany.
Tamin'izany fomba izany, dia niezaka ny hampiditra fanaon'ny ny tranga izay voalaza fa fa tena ahitanao an'ilay izy.
Fa Horukon fisamborana sy ny fomba fitondran-tena, dia zava-dehibe dia ny hinoanareo izay iray satria misy teoria. Ary rehefa afaka izany, misy ihany ny zava-nitranga stacking sarobidy eo amin'ny fampiharana.